Srasta Khabar:: साहित्य संवद्र्धन–साहित्य वर्ष पुस्तक Srasta Khabar
‘प्रयास कहिल्यै खेर जाँदैन’ भन्ने साहित्य संर्वद्र्धन केन्द्रका महासचिव विनयकुमार शर्मा नेपालसँग स्रष्टाखबरको लागि अमृता अर्यालले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः
(१) ‘साहित्य संवद्र्धन–साहित्य वर्ष पुस्तक २०७१’मेरो हात प¥यो नि त ! यसको विशेषता के हो नि ?
यो वर्षभरि देशबाट निस्केका नेपाली साहित्यका पुस्तकहरूको लेखक र कृतिको प्रवृत्तिसहितको टिप्पणी भएको पुस्तकहरूको परिचय दिने पुस्तक हो । यो काम नेपाली साहित्य फाँटमा धेरै अगाडिदेखि नै भइसक्नु पर्ने थियो तर कतैबाट भएन । आरम्भको प्रयाससम्म हामीले गरेका छौँ, बाधा, व्यवधान क्रमशः हट्दै जान्छ भन्ने कुरामा पनि हामी पूर्णतया विश्वस्त छौँ । ‘प्रयास गरौँ, प्रयास कहिल्यै खेर जाँदैन’ भन्ने मेरो मतले निरन्तरता र श्रमको खाँचोलाई पनि औँल्याइरहेको देखिन्छ । ‘मन भएपछि धनको के खाँचो ?’ अनगिन्ती विकल्प पनि त खुल्दै जालान् नि !
(२) यसले के के फाइदा देला त नेपाली साहित्यलाई ?
पुराना स्रष्टा र पुस्तक बारे सोध, खोज, अनुसन्धान गर्न अन्वेषकहरूलाई परेको कठिनाइलाई यसले निरन्तरता पाइरह्यो भने निश्चय नै भविष्यमा गरिने वा हुने अनुसन्धानमा केही प्रभावकारी भूमिका अवश्य नै पूरा गर्नेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ ।
(३) यस्तो प्रयास अन्तबाट भएको छैन ?
मेरो जानकारीमा आएसम्म छैन । कतै कुनै देशमा निस्केको भए थाहा भएन । हाम्रो देशमा यस्तो काम सरकार, शिक्षा संस्कृति मन्त्रालय वा प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ताले गर्नु पर्ने हो तर ती संस्था र त्यसमा रहने वा रहेका व्यक्तित्वहरू भागभण्डामा डुबेकाले हुन सकेको छैन । देशका प्रबुद्ध वर्ग साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि व्यक्तित्वहरूको रेकर्ड राख्ने काम सरकारको हो तर हामी कहाँ यस्ता प्रबुद्ध वर्ग आफैले आफ्नो परिचय आफ्नो पुस्तकमा राखेर अस्तित्व बचाउनु परिरहेको छ, यो ठूलो बिडम्बना हो । रहरैरहरले ‘साहित्य संवद्र्धन केन्द्र’को स्थापना भो, रहरैरहरले वर्ष पुस्तकको परिकल्पना भो र आज साकार पनि भो, तर यसले भविष्य भविष्यसम्म निरन्तरता पाइरहनुपर्छ ।
(४) यो कहिले कहिले निस्कन्छ नि ?
हरेक वर्षको वैशाखदेखि चैत्रसम्ममा प्रकाशित पुस्तकहरूको नालीबेली यसमा राखिने प्रयास हुनेछ । हरेक ज्येष्ठ महिनामा यसको प्रकाशन हुनेछ । यस पल्ट भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले केही ढीलो हुन गयो ।
(५) यसमा के कति काम भए र के के हुन बाँकी छन् ?
यसपल्ट पहिलो वर्ष २०७१ भरि निस्केका ४०० पुस्तक समावेश भएका छन् । यो पहिलो बामे सराइ हुनाले के कति स्रष्टाका पुस्तकहरू छुटे तिनको जानकारी प्राप्त भए ०७२ को वर्ष पुस्तकमा परिशिष्ट भित्र राखिने नै छ । यसपल्ट चाहँदा चाहँदै पनि बाल साहित्यमा उल्लेखयोग्य खोजी गर्न सकिएन । अर्को वर्षदेखि निरन्तर नेपाली स्रष्टाले लेखेका अङ्ग्रेजी साहित्य, नेपालमा बोलिने लेखिने मातृभाषाहरूका पुस्तकहरू, प्रविधिक तथा अन्य खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिका पुस्तकहरूको पनि क्रमशः विवरण उपलब्ध गराउने प्रयास जारिरहनेछ ।
(६) अनि के लेखक प्रकाशकले साथ दिएका छन् त ?
यस्तो खोजीको काम खोज गर्ने संस्था वा व्यक्तिको रहर र बाध्यता त, हो नै तर खोज गरिने पुस्तकका स्रष्टा, प्रकाशकले पनि यसलाई आफ्नो दायित्व ठानेछन् भने अवश्य नै यसले हरेक वर्ष पूर्णता पाउने नै छ । लेखक प्रकाशक जसले आफ्नो पुस्तकको जानकारी माग्दा निराश पारे त्यसबाट आउँदो वर्षमा अवश्य मुक्ति पाइनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छोँ ।
(७) यसमा पत्रकार र पत्रिकाको पनि केही भूमिका छ कि ?
अवश्य ! साहित्य र पत्रकारिता परस्पर अन्तरसम्बन्धित कुरा हुन् । यो ‘वर्ष पुस्तक’ले निरन्तरता पायो भने अवश्य नै यसले देशको एउटा ठूलो बौद्धिक क्षेत्रको अभिलेखन गर्नेछ र शोध खोज गर्ने र इतिहास, समालोचना लेख्नेका लागि यसले भविष्यमा पक्कै राम्रो योगदान दिनेछ भन्ने कुरामा शङ्कै छैन । यस्तो महङ्खवपूर्ण कार्य केही व्यक्तिले मात्र गरेर हुँदैन यसमा सबैको सरसहयोगको खाँचो छ । तपाईंहरूबाट पनि आफ्नो पत्रिका माफर्त यसको जानकारी वा सूचना जनतासम्म पु¥याइदिनु होला भन्ने ठूलो सहयोगको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ ।
(८) पाठक र साहित्यप्रेमीहरूलाई अन्तमा केहि भन्नु छ ?
वर्ष पुस्तक ०७२ को तयारीमा हामी लागिसकेका छौँ त्यसैले सम्भव भए पुस्तक, नभए विवरण, त्यो पनि नभए लेखक प्रकाशकबाट जानकारी चैत्रभित्रमा हामीलाई पठाउनु होला । जुन जसरी प्राप्त हुनेछ त्यसको विवरण त्यसै अनुरूप अभिलेख राखिनेछ । तपाईंले दिनुभएका पुस्तकहरू जम्मा गरेर भविष्यमा एउटा ठूलै पुस्तकालय पनि खुल्ने सम्भावना होला कि ? भन्नेमा पनि हामी आशावादी छौँ ।